Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Wararka Injineerinka Warbaahinta
Broadcast Beat - Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Asturnaantaada ayaa muhiim noo ah, sidaa darteed waxaan soo saarnay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah oo ay ku jiraan macluumaad muhiim ah sida cidda aan nahay, sida iyo sababta aan u ururino macluumaadkaaga shaqsiyadeed, iyo sidoo kale sida aan u isticmaalno iyo u keydinno macluumaadkan, oo ay ku jiraan la xiriirida marinkaaga iyo isticmaalka websaydhkayaga iyo barnaamijyadeenna (barnaamijyadooda). Waxaan kaa codsaneynaa inaad si taxaddar leh u aqriso maadaama ay ku jiraan macluumaad muhiim ah waxayna sharxaysaa sida loola xiriiro haddii aad wax su'aalo ah qabtid. Sidoo kale fadlan la soco adoo adeegsanaya adeegyadeena, waxaan u qaadaneynaa inaad ku faraxsan tahay annaga inaan ka shaqeyno macluumaadkaaga shaqsiyeed sida lagu qeexay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Beat Warbaahin waa qalab warbaahineed oo dijital ah oo loogu talagalay inay bixiso warka-iyo-macluumaadka tiknoolijiyadda ee warbaahinta, sawirka masawirka iyo warshadaha wax soo saarka boostada. Waxaanu ku yaalaa 4028 NE 6th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33334. Nambarkeena xidhiidhka waa 954-233-1978. Helitaanka mareegtayada waxaa si toos ah loogu heli karaa boggeena internetka www.broadcastbeat.com. Beatka daabacan waxaa ka go'an ilaalinta qarsoodiga iyo macluumaadka kuwa raacaya mawduuceena.
Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed
Waxaan kugu qanacsanahay inaad raacdo wararka iyo macluumaadka aan siino warshadeena waxaanna tixgelinaynaa macluumaadkaaga xasaasiga ah. Hadafkeenu waa inaan hubinno in gudbintayadu ay tahay mid aamin ah oo asturnaantaada la ilaaliyo. Intaa waxaa sii dheer, markaad daalacato boggeena internetka, waxaan ula soconnaa ujeedooyin gorfayn sida tijaabinta qaabab cusub, adeegsadeyaal saaxiibtinimo leh iyo mowduucyo adiga kugu habboon. Waxaan sidoo kale keydin doonnaa wixii macluumaad ah ee aad iskood u soo gudbiso; tusaale ahaan, emayllada lala xiriiro, talooyinka barnaamijyada, weydiimaha la xiriira barnaamijyada ka socda bandhigyada warshadaha, codsiyada wareysiyada, waraaqaha cad, websaydhada iyo tartamada.
Ilaalinta Macluumaadka Shakhsiyeed
Ogaysiiskayaga asturnaanta wuxuu kuu sheegayaa macluumaadka shakhsiyeed (PD) iyo xogta aan shakhsiga ahayn (NPD) ee laga yaabo inaan kaa soo aruurino, sida aan u soo aruurinno, sida aan u ilaalino, sida aad u heli kartid una bedeli kartid. Ogeysiiska qarsoodiga ah ayaa sidoo kale sharxaya qaar ka mid ah xuquuqda sharciga ah ee aad haysato marka la eego xogtaada shakhsi ahaaneed.
Markaad isticmaaleysid boggayaga iyo barnaamijyadeena, oo aad u gudbiso xogta shakhsi ahaaneed, waxaad xaq u yeelan kartaa qaar ka mid ah Xeer-ilaalinta Guud Guud (GDPR) iyo sharciyada kale. Iyada oo ku xidhan saldhigga sharciga ah ee lagu fulinayo macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed, waxaa laga yaabaa inaad leedahay qaar ama dhammaan xuquuqaha soo socda:
Xaq u lahaanshaha in laguu wargaliyo - Waxaad xaq u leedahay in laguu ogeysiiyo xogta shaqsiyadeed ee aan kaa soo aruurino, iyo sida aan u socodsiino.
Xaqa helitaanka - Waxaad xaq u leedahay inaad hesho xaqiijin ah in xogtaada shaqsiyadeed la shaqeynayo oo aad awood u leedahay inaad ku hesho xogtaada shaqsiyeed.
Xaqa sixitaanka - Waxaad xaq u leedahay in lagu saxo xogtaada shaqsiyeed haddii aysan khaldnayn ama aan dhameystirnayn.
Xaq u lahaanshaha masaxida (xaq ulahaa in la iloobo) - Waxaad xaq u leedahay inaad codsato ka saarida ama tirtirka xogtaada shaqsiga ah hadii aysan jirin sabab macquul ah oo aan ugu sii wadi karno howsheeda.
Xaqa aad u leedahay inaad xaddiddo ka shaqeynta - Waxaad xaq u leedahay inaad 'xannibo' ama aad xaddido ka shaqeynta xogtaada shaqsiyeed. Markii xogtaada shaqsiyadeed la xaddido, waxaa naloo ogol yahay inaan xafidno xogtaada, laakiin maaha inaan sii sii wadno.
Xaq u lahaanshaha wargelinta waxqabadka - Waxaad xaq u leedahay inaad codsato oo aad hesho macluumaadkaaga shakhsiga ah ee aad na siisay oo aad u isticmaashay ujeeddooyinkiina. Waxaan ku siin doonaa xogtaada maalmaha 30 ee codsigaaga. Si aad u codsato xogtaada shakhsiyeed, fadlan nagala soo xariir adigoo isticmaalaya macluumaadka ku yaalla xagga sare ee digniintaas gaarka ah.
Xaqa aad u leedahay inaad diido - Waxaad xaq u leedahay inaad diiddo annaga oo ka shaqeyneyno xogtaada shakhsi ahaaneed sababahan soo socda: Nidaamku wuxuu ku saleysnaa danaha sharciga ah ama fulinta waxqabadka danta guud / ku dhaqanka awoodda rasmiga ah (oo ay ku jiraan muujinta); Suuqgeyn toos ah (oo ay kujirto muujinta); iyo Ka baaraandegidda ujeeddooyin cilmi-baaris cilmiyeed / taariikheed iyo tirakoob. Xuquuqda la xiriirta go'aan gaarista otomaatiga ah iyo tilmaamidda.
Go'aan qaadashada shaqsi ahaaneed iyo soosaaristaada - Waxaad xaq u yeelan doontaa inaadan lagaa hoos bixin go'aanka ku saleysan kaliya habka otomaatigga ah, oo ay ku jirto muuqaalka, oo soo saaraya saameyn sharci oo adiga kugu saabsan ama si la mid ah si weyn kuu saameeya.
Cabasho u gudbinta maamulka - Waxaad xaq u leedahay inaad cabasho u gudbiso hay'adaha kormeerka haddii macluumaadkaaga aan loo hirgelinin si waafaqsan Xeer-ilaalinta Guud Guud. Haddii maamulada kormeerku ay ku guul daraystaan ​​inay wax ka qabtaan cabashadaada, waxaad xaq u leedahay inaad hesho xalal maxkamadeed. Wixii faahfaahin ah ee ku saabsan xuquuqdaada sharciga, booqo www.privacyshield.gov/
Ma siin doonno xog aan ku hayno fulinta sharciga iyada oo aan la haysan amar maxkamadeed. Haddii taasi dhacdo, waxaan isku dayi doonaa in aan kugu wargelino codsigaaga haddii aan sharci ahaan ka hortageynin inaan sameyno.
Marka aad isticmaasho Broadcast Beat waxaan isticmaali karnaa "cookies", "shabakadaha webka", iyo qalabka la midka ah ee lagu hayo hawlahaaga. Macluumaadyadan yaryar ee macluumaadka ayaa lagu kaydiyaa darawalkaaga adag, ee ma ahan bogga 'Broadcast Beat'.
Waxaan u adeegsanaa cookies si aan kaaga caawino inaad dhex dhexaadiso shabakadda Broadcast Beat's sida ugu fudud ee suurtogalka ah, iyo inaad xasuusato macluumaadka ku saabsan fadhigaaga hadda. Uma adeegsanno tikniyoolajiyaddan inaan ku jaajuusno ama haddii kale ku xadgudubno arrimahaaga gaarka ah. Waad ka joojin kartaa cookies-ka iyo tikniyoolajiyada raadinta adoo adeegsanaya biraawsarkaaga shabakadda.
Ammaanka iyo Kaydinta
Websaydhka 'Broadcast Beat' wuxuu leeyahay tallaabooyin amni oo heer warshadeed ah oo lagu ilaaliyo luminta, si xun u isticmaalka, iyo beddelka macluumaadka ku jira gacantayada. In kasta oo aanu internetka ka jirin wax la yiraahdo “ammaan dhammaystiran”, haddana waxaan qaadi doonnaa dhammaan tallaabooyinka macquulka ah si aan u hubino ammaanka macluumaadkaaga.
Xogta oo dhan waa la soo marayaa SSL / TLS marka la gudbiyo inta udhaxeysa server-yada iyo shabakadaada. Xogta xogta xogta naloo aqoonsan ma aha (maxaa yeelay waxay u baahan tahay in si deg deg ah loo helo), laakiin waxaanu aad u dheereynaa si aan u hubino xogtaada nasashada.
Ma iibin doonno ama aan la wadaagi doonno macluumaadkaan cid kasta oo saddexaad.
Macluumaadka La tirtiray
Waxaanu haynaa nuqullo, oo loogu talagalay dib u soo kabashada nidaamka ba'an, ee loogu talagalay maalmaha 30. Nafaqada ayaa lagu nadiifiyey wareegga xaddiga 30. Marka emails la akhriyo oo aan la badbaadin, si toos ah ayaa loo nadiifiyaa on 30-wareegga-wareegga.
Isbedelka iyo Su'aalaha
Wax-ka-beddelka qoraalkan ayaa lagu soo dhejin doonaa URL-kan waxana uu noqonayaa mid waxtar leh marka la dhajiyo. Isticmaalkaaga sii socota ee boggan ka dib boostada wax ka bedelka, isbeddelka, ama isbeddelka ayaa noqonaya aqbalida aqbalaadda. Waxaanu ku wargelin doonaa isbeddel muhiim ah adigoo soo diraya email-kiisa ama adigoo kuugu sheegaya ogeysiis caan ah oo ku saabsan boggayaga. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo kusaabsan qoraalka arimaha gaarka ah ama ficiladaada la leh Broadcast Beat, waad nala soo xiriiri kartaa [emailka waa la ilaaliyay].